Muqdisho Xasilinteeda yaa qaabilsan Shiikh Shariif Axmed mise Cumar Cabdirashiid? • Horseed Media
You are here: Home / Featured / Editorial / Muqdisho Xasilinteeda yaa qaabilsan Shiikh Shariif Axmed mise Cumar Cabdirashiid?
Madaxweynaha Dowlada Federaalka Kumeelgaarka Soomaaliya Shiikh Shariif Axmed ayaa xafiiskiisa kasoo saaray maalinimadii shalay qoraal lagu sheegay in Madaxtooyada aysan waxna ka ogeyn iscasilaada Wasiirada ka tirsanaa xukuumada DFKMG.
Qoraalkan oo lagu magacaabayÂ “…Mawqifka Madaxtooyada Soomaaliya Ee Ku Aaddan Is-casilaadda Wasiirada…” ayaa lagu sheegay in arrintan iscasilaada ahÂ ay u taal Xukuumada dhexdeeda, isla markaana aysan Madaxtooyada ama Madaxweynaha uusan arrintan waxna kala socon.
Qoraalkan ayaa lagu sheegay in lasoo saaray kadib markii Saxaafadda qaarkeed iyo dadka falanqeeya Siyaasada Soomaaliya ay sheegeen in iscasilaada ay salka ku heyso talooyin uga yimid dhanka Madaxweynaha oo ay hada xurguf siyaasadeed ka dhaxeyso Raysalwasaare Cumar Cabdirashiid.
Hadaba qoraalkan ayaa sii xoojiyey shakigii laga qabay in Madaxtooyada ay ka danbeyso iscasilaada Wasiirada sida weyn ugu dhawaa Madaxweynaha, waxaana su’aasha la isweydiinayo ay tahay in Qoraalkan aan looga hadlin hadaladii Wasiirada kasoo yeeray ayadoo xubnahaasi iscasilay ku andacoodeen in Dowlada ay hawsheedii gabtay isla markaana ay dowlada hanan weyday shacabka iyo gacan ku dhigida magaalada Muqdisho.
Kaalintee buu Shariif ku leeyahay ka hirgelinta Dowlada gudaha magaalada Muqdisho?
Inta badan xubnaha xilka iska casilay ayaa ku dooday in;
-Â Dowlada ay ku fashilantay inay gacanta ku dhigto magaalada Muqdisho,
– Â amniga sugto,
– isla markaana dowlada la balaariyo.
Qodobadan ayaa la oron karaa waa kuwo muhiim ah in wax badan la iska weydiiyo sababaha ay dowlada uga gaabisay.
Waxaa xiligan muddan in Madaxweyne Shiikh Shariif ka jawaabo su’aalahaasi ay keeneen wasiirada kamid ah asxaabtiisa, waa lama huraan inÂ Madaxweynaha ka jawaabo habka ay dowlada Muqdisho gacanta ugu dhigi weyday?
Dowlada xiligan dhisan oo lagu sheegay Dowlad Midnimo Qaran ayaa markii lagu magacaabayey magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti, la hadal hayey in Madaxweynaha xilka loo doortay ee Shiikh Shariif Axmed uu si fudud ugu guuleysan doono inuu soo afjaro dagaalada Muqdisho ka socda, maadaamaÂ uu asaguÂ asal ahaan kasoojeedo deegaankaasi, isla markaana siduu ugu guuleystay xiligii Maxkamada IslaamigaÂ uu nabad kusoo celin doono caasimada Soomaaliya.
Kaalinta ShiikhÂ Shariif Axmed
Shariif Axmed ayaa kaalintiisu ahayd inuu meel mariyo dowlada asagoo magaalada Muqdisho ka bilaabaya in dowlada ay gacanta kuwada dhigto, asagoo xilka loo magacaabay uu ku hantay inuu kamid ahaa Maxkamadihii islaamiga iyo mucaaradkii dowladii Cabdullahi Yusuf kasoo horjeeday.
Shiikh Shariif kuma guuleysan inuu magaaladii uu kasoo jeeday ee Muqdisho uu gacanta ku dhigo, dowladiina waxay noqotay mid horey u dhaqaaqi weyday oo kusoo kooban xarunta Madaxtooyada Villa Soomaaliya iyo goobaha ay illaaliyaan ciidamada AMISOM.
Madaxweynaha intuu xilka hayey wuxuu wakhti badan geliyey siduu safaro ugu bixin lahaa shirarka caalamka ka dhacaya, xili la wada sugayey inuu tuute u xirto nabadeynta Muqdisho sidii xiligii Maxkamadaha Islaamiga uu hogaamin jiray uu uga qeyb qaatay dagaaladii ka dhacay Muqdisho.
Hadaba kaalintii Shiikh Shariif ayaa ah mid aan meesha ka muuqan sida ay inta badan dadka ay afka ku hayaan, ayadoo muuqata Madaxweynaha in uusan xiligan diyaar u ahayn inuu ka jawaabo sababaha keentay inuu ku fashilo xasilinta Xaafadihii uu kasoo jeeday ee lagu tirinayey inuu hogaanka u qabto.
Kaalinta Raysalwasaare Cumar Cabdirashiid
Xiligii uu Madaxweynaha Dowlada Federaalka Shiikh Shariif soo magacaabayey Raysalwasaaraha waxaa kamid ahaa qodobadii kusoo xulay inuu yahay nin siyaasi ah isla markaana siyaasada Soomaaliya dhanka dibada ka dhisi kara isla markaana aan ahayn Askari dagaal gala balse xukuumad shaqeysa soo dhiso, Beesha Caalamkana taageero ka helo.
Waxaa muuqata in hawshii Cumar Cabdirashiid uu la wareegay Madaxweyne Shariif Axmed oo uu ku mashquulay safarada dibada iyo shirarka caalamiga ah, hadaba Cumar Cabdirashiid asagu ma qaban karaa hawshii Shariif Axmed looga fadhiyey ee ahayd xasilinta Muqdisho iyo soo jiidashada kalsoonida shacabka ku dhaqan Caasimada Soomaaliya?
Hadaba su’aalahan iyo kuwo kale oo badan ayaa muuqda inay shacabka is weydiinayaan, waxaana su’aasha meesha taal ay tahay hadiiÂ Baarlamaanka Federaalka xilka ka xayuubiyo Raysalwasaare Cumar Cabdirashiid, qofka lagu bedali doono ma noqon doonaa mid dowlada heerka ay maanta taagan tahay wax ka bedala, inta Madaxweyne Shariif Axmed kaalintii looga fadhiyey ee xasilinta Muqdisho aan kasoo bixin?
Madaxweynaha waxaa looga fadhiyey inuu jawaab ka bixiyo hadaladii kasoo yeeray Wasiirada iyo qodobada ay ka dhawaajiyeen in aan waxna laga qaban, halka uushegayo in arrimaha Golaha Wasiirada oo kaliya dhexdeeda u taal, isla markaana shacabka ka qanciyo sababta dowlada ay ugu guuleysan la’adahay la wareegida iyo amniga magaalada Muqdisho?